Galgaduud 27 Dec, 2011Bannaanbax ballaaran oo ay ka qeybgaleen dadweynaha ku dhaqan degmaga Guricee,l ayaa waxay ku muujiyeen sida ay uga xun yihiin dil dhawaan shaqaale ka tirsanaa barnaamijka cuntada adduunka loogu gaystay degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan.
Bannaanbaxa oo ay soo qaban qaabiyeen bulshada rayidka ah, ayadoo ay ka qeybgaleen ardayda dugsiyada wax ka barta, Culumaa`uddiinka Ahlusunna iyo Ganacsatada ayaa wuxuu daba socday cambaareyn ka soo yeeraysay odayaasha iyo waxg aradka bartamaha Soomaaliya oo ay ku dalbanayaan in tallaabo laga qaado ciddii isku daydaa qalqalgelinta amniga deegaannadaas. Dadweynaha ayaa waxay socod ku mareen waddada shaaraca ah ee degmada Guriceel, iyadoo ay halkaasi kula hadleen mas`uuliyiin ka tirsan maamulka Ahlu-sunna Waljameeca
Sheekh Maxamed Yuusuf Xeefow , oo ah guddoomiyaha golaha fulinta Ahlusunna ayaa dadweynaha u xaqiijiyay in gacanta lagu soo dhigay ninkii dilkaasi ka dambeeyay, ayna ku hayaan baaritaan arrintaasi la xiriirta “ Sharciga ayaa la soo taagi doonaa, isaga iyo ciddii kale ee ay ku caddaato dambiga.” ayuu yiri sheekhu.
Qaar kamid ah dadkii ku hadlayay magaca ururrada bulshada rayidka ah, ayaa goobta ka sheegay in sida loogu baahanyahay in loogu midoobo amniga si looga hortago dadka isku daya carqaladeynta amniga.
Bannaanbaxa ayaa yimid xilli ay maalmo ka hor nin hubeysan uu dil u geystay 3 ka mid ah shaqaalaha samafalka, kuwaasi oo laba ka tirsan ay u shaqaynayeen barnaamijka cuntada adduunka.